HomeTORKIAFaritra mainty hoditraTafika 52Centerambaşı Ski Center Miomana amin'ny vanim-potoana
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş Tafika 52, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, TORKIA, TELPHER 0
cambasi ski resort dia miomana amin'ny vanim-potoana
Tiorkia Çambaşı miavaka mampiavaka ny maha-akaiky indrindra any an-dranomasina dia manomana ny vanim-potoana Ski Ski 2019-2020.
Çambaşı Ski Center izay hita ao amin'ny hekona 2000 eo amin'ny haavon'ny 650 an'i Ordu Metropolitan Municipality ary hita ao amin'ny 52 km lavitra ny afovoan-tanàna; Efatra fizaran-taona Çambaşı Hotel, trano fisakafoanana Slalom Café, Zirve Café, snacks sakafo sakafo, kozisialy ary efitrano fanaovana dia ho vonona amin'ny vanim-potoana ririnina.
Çambaşı Nature Facility, izay ankafizin'ny mpitia ski any amin'ny faritra, dia manomana hazakazaka vaovao amin'ny alàlan'ny ski, fitehirizam-bokatra amin'ny fantsom-biby ski, fikojakojana ny chairlifts, amboariny ny faritra mivangongo, fanarenana ny rano ambonin'ny rano ary maro hafa.
Tamin'ny vanim-potoana lasa, ny hetsika ataon'ny skier miaraka amin'ny soso-kevitra amin'ny vanim-potoana vaovao dia mikasa ny hoentina amin'ny vanim-potoana ririnina. Centerambaşı Ski Center, izay hiasa eo an-toerana, nasionaly sy iraisam-pirenena, ary hampiantrano ny fifaninanana izay hatao eo amin'ny sehatra nasionaly.
Ny vanim-potoana fialam-boly Skiers 2019-2020 dia hanana vanim-potoana mahafinaritra miaraka amin'ireo zotra vaovao sy fitaovana ara-tsosialy vaovao isan'andro.
Manomana Skiing ny Ski Center Cıbıltepe 15 / 09 / 2016 Cibiltepe Ski, tia manao ski ambony Vanim-potoanan'ny ny Fanomanana: Cibiltepe Ski Center ao amin'ny faritr'i Kars Sarikamis manan-danja eo amin'ny fizahan-tany ririnina foiben'ny Torkia, dia manomana ny Ski vanim-potoana. Ny governemanta Sarıkamış Göksal Toksoy, izay nanao fanadihadiana tao amin'ny tobim-pandihizana, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa nanohy haingana ny asa. Etsy ankilany, ny "Erzurum, Erzincan ary Kars Winter Tourism Corridor" dia tao anatin'ny sehatry ny tambajotram-pitrandrahana arintany, sehatra mpanangona, toeram-pitrandrahana fitrandrahana ala, fivarotana varotra, sehatry ny lalao nohavaozana, asa fambolena asa, etsy ankilany, Sarıkamış, ao anatin'ny roa taona miaraka amin'ny fampiasam-bolan'ny fanjakana sy sehatra tsy miankina.
Ski Center Bayraktepe miomana amin'ny vanin-taona ririnina 18 / 11 / 2013 Miomana ny Winter Ski Season Bayraktepe: Bayraktepe mpiandry raharaha ao amin'ny Sarıkamış Ski Center, izay iray amin'ireo lehibe Tiorkia Ski Resorts, dia nanomboka nanomana ny vanim-potoana ririnina. Anisan'ireo ala tao Sarıçam sy fantatra amin'ny ranomandry kristaly, dia nanamafy ny hetsika tao amin'ny toeram-pamokarana mekanika sy ny lalamby tao amin'ny Ski Ski Center Bayraktepe. Nilaza ny mpitondra tenin'ny governemanta Muhammad Gurbuz, masoivoho Amerikana AA, talohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina ho avy eo amin'ny lapam-panjakana ary manomboka ny fikarakarana sy ny fiomanana ny asa fanjonoana, hoy izy. Sarikamish sy ny fampiasam-bola natao eo amin'ny lafiny fizahan-tany amin'ny tetikasa ririnina Gurbuz milaza hisy Torkia ny kintana mamirapiratra, "Winter teny manodidina ny asa fanomanana sy 8 9 piaramanidina famenoana sy leveling asa ...
Sarıkamış Ski Center Miomana amin'ny vanim-potoana ririnina 18 / 09 / 2019 Governoran'i Kars ny Kamboty Torkia, izay efa lasa mamirapiratra ny kintana ao Torkia ririnina fizahan-tany sy ny 2019-2020 fanadihadiana nahita Sarıkamış Ski Center nomanina ho amin'ny vanim-potoana ririnina. Governora ao Tiorkia Kamboty, voalohany toy ny fanorenana mitohy sy ny Torkia ihany no Sarıkamış Ski Center izay hatao ao anaty fanompoana ho mihidy rafitra sy 6-seater ambony seza amin'ny ora 3 arivo sy iray alina ny olona afaka mizara tsara ny vaovao Ski hanandratra rafitra in 2 kilometatra ny lavany, milina fitaovana, jiro sy 4 kilaometatra ny lavany ny fiaingana ny lalana slalom vaovao sy ny manampahefana dia nampahafantarina ny asa vita. Ny governora avy eo dia nanangana an'i Kütük Ev miaraka amin'ny faritra mety hipetrahana, kafe ary efitra fanaovana ski.
Ny Yildiz dia manomana ny fizaran-taona vaovao 27 / 07 / 2015 Ny Yıldız Mountain dia manomana ny fizaran-taona vaovao: Manomboka ny fanomanana mba hanatsarana ny fari-dalan'ny lalana sy ny kalitaon'ny Toeram-pisakafoana ao amin'ny Tendrombohitra Sports of Yıldız amin'ny vanim-potoana vaovao. Araka ny fanambarana an-tsoratra avy amin'ny Fitondram-panjakana Sivas Manokana, ny Sekretera Jeneralin'ny Sampan-draharahan'ny Salih Ayhan, nandinika ny asa any amin'ny làlan-dàlana sy ny ski, dia nahazo vaovao avy amin'ny manampahefana. Raha jerena ny asa fanorenan'ny Ayhan, ny Yıldız Mountain Tourism Center Tourism Tourism, izay anisan'ireo tetik'asa lehibe ao amin'ilay orinasa, dia nilaza fa mbola manohy manatsara ny fari-pahefana sy ny kalitaon'ny lalana ny hetsika. Manome vaovao momba ny tetikasa làlan'ny 82 kilometatra eo anelanelan'i Çermik mafana sy ny seranam-piaramanidina sy ny foibe i Ayhan.
Erciyes miomana amin'ny fizaran-taona 14 / 11 / 2015 Manomana i Erciyes Ski Season: Ny fikarohana sy ny famonjena an-keriny nataon'i Erciyes dia natao mba hiomanana amin'ny vanim-potoana vaovao. Ny fikarohana sy ny famonjena dia natao tao amin'ny Centre Ski Centre Erciyes mba hiomanana amin'ny vanim-potoana vaovao. Ny fikarohana an-dalam-pandrosoana an'i Kayseri Metropolitan Erciyes AS sy ny fiarovana sy ny fiarandalamby ary ny ekipan'ny Gendarmerie Search and Rescue (JAK) dia nanao fifanarahana nahomby tamin'ny mpandeha 8 niaraka tamin'ny fiara fitaterana. Araka ity tranga ity, ny lalam-by izay misy olona 8 dia mipetraka ao amin'ny faritanin'i Hisarcık, izay nijanona taorian'ny ora fohy noho ny tsy fahombiazan'ny teknika. Ireo ekipa fampitandremana malfunction malfunction, dia tonga teo amin'ilay sehatra raha vao haingana. Ireo ekipa mandray fepetra fiarovana amin'ny alàlan'ny fitarihana ny asa fanapahan-kevitra,
Manomana Skiing ny Ski Center Cıbıltepe
Ski Center Bayraktepe miomana amin'ny vanin-taona ririnina
Sarıkamış Ski Center Miomana amin'ny vanim-potoana ririnina
Ny Yildiz dia manomana ny fizaran-taona vaovao
Erciyes miomana amin'ny fizaran-taona
Ski Center Salda voaomana amin'ny vanin-taona ririnina
Ny seranam-piaramanidina Palandoken dia miomana amin'ny vanim-potoana
Toeram-pisakafoanana an-kalamanjana Ergan Mountain Miomana amin'ny vanim-potoana
Ny Cıbıltepe Ski Centre dia miomana amin'ny vanim-potoana